ပြောင်းပုံရိပ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများ - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
ယနေ့အထိ, ကွန်ယက်ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့အတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေလျှင်, တခါတရံတွင်သင်သည်ဥပမာအရွယ်အစားလျှော့ချဖို့သူတို့ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာကျနော်တို့မသာဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် ပုံရိပ်တွေပြောင်းအခါမည်သို့အကောင်းဆုံးသုံးစွဲဖို့သို့သော်လည်း, လူကြိုက်များကို formats အာရုံစိုက် ...
1. converting နှင့်ကြည့်ရှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဝဲ
2. လူကြိုက်များသော Formats: အကောင်းအဆိုး cons
4. (မျိုးစုံရုပ်ပုံများ) ပြောင်း
ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ (အနည်းဆုံး, developer များဖော်ပြချက်အရ) 500 ခန့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကို support!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော် program ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်သောဂရပ်ဖစ်ကို formats မြင်ကြပြီမဟုတ်။
- အသုတ်ပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင် converting ပုံရိပ်တွေ,
- pdf ဖိုင်တွေရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်း (ကဒီမှာကြည့်ပါ။ )
- (သင်အာကာသအများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်သည်) အလားတူရုပ်ပုံများကိုရှာပါ။ စကားမစပ်ယခင်ကထပ်ဖိုင်များကိုရှာဖွေရေးအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိ၏
- စသည်တို့ကို, screenshots များဖန်တီး
ယနေ့အထိ, ဂရပ်ဖစ်ဖိုင် Format များစွာရှိပါသည်။ ဤတွင်ကျွန်မကွန်ယက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်ပုံများ၏အများစုတက်စေသောအခြေခံအကျဆုံးသူမြားကိုဖော်ပြထားခြင်းချင်ပါတယ်။
BMP - ပုံရိပ်တွေသိုလှောင်ခြင်းနှင့် processing များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကို formats တဦး။ ဒီ format နဲ့ပုံများ, နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်, ထို JPG format နဲ့ထက် 10 ဆပိုပြီး hard drive ကိုအာကာသတွေအများကြီးယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအင်တာနက်ကိုကျော်ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းရန်ဥပမာ, Archiver compress ဖြစ်နှင့်သိသိသာသာသူတို့ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဒါကပုံစံကဲ့သို့သင်တို့အဆုံးစွန်အတွက်တည်းဖြတ်ချင်သောပုံများ, များအတွက်စံပြဖြစ် ကလျှော့ပေးဖို့ပုံရိပ်နှင့်အရည်အသွေးချုံ့မထားဘူး။
JPG - ပုံရိပ်တွေများအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံး format နဲ့! ဒီ format နဲ့, သင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိပုံရိပ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေနိုင်သည်အသေးဆုံးကနေအများအပြား megabytes ရန်။ ပုံစံ၏အဓိကအားသာချက်: ထူးမြတ်သောဘွဲ့လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးမြင့်မှာ image ကိုချုံ့။
ဒါဟာသင်တို့သည်နောက်တဖန် edited မည်ဖြစ်ကြောင်းပုံရိပ်တွေများအတွက်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။
GIF, PNG - အင်တာနက်ပေါ်ရှိအမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမကြာခဏ-ဖြစ်ပေါ်ကို formats ။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်က၎င်း၏အရည်အသွေးကိုတစ်လျောက်ပတ်သောအဆင့်မှာအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်, ကာလ၏ပုံရိပ်ကိုများစွာချုံ့နှင့်နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, JPG နဲ့မတူပဲ, ဒီ format နဲ့သင်တစ်ဦးပွင့်လင်းနောက်ခံစွန့်ခွာရန်ခွင့်ပြုသည်! ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော့်ကိုဒီဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ဤပုံစံများကိုအသုံးပြုပါ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရာအားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အဆင့်များစဉ်းစားပါ။
1) XnView program ကို run ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆို image ကိုဖွင့်လှစ်။
2) ယင်းနောက်ခလုတ်ကို "အဖြစ်ကယ်တင်" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
စကားမစပ်အောက်ဆုံးလိုင်းအာရုံစိုက်: ကရာအရပ်ကိုကြာအဖြစ်၎င်း၏ checksum, ပုံရဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
3) BMP, JPG, TIF, ICO, PDF ဖိုင်ရယူရန်, etc: အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင် 2-3 တစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများပူဇော်ပါလိမ့်မယ် သူ့ရဲ့စံနမူနာခုနှစ်, ငါ, BMP ကိုရွေးပါ။ "ကယ်တင်" ပေါ်တွင်ပုံစံကလစ်ရွေးချယ်ရာတွင်ပြီးနောက်။
4) အရာအားလုံး! စကားမစပ်ပုံရဲ့အောက်ခြေမှာ, သငျသညျ, BMP format နဲ့ image ကိုချွေတာကြောင့်တွေ့နိုင်ပါသည် - ကအများကြီးပိုအာကာသသိမ်းပိုက်ဖို့စတင်ခဲ့: (မူရင်း JPG အတွက်) 45 KB 1.1 MB အထိဖြစ်လာခဲ့သည် (Thu ဖြစ်ပါတယ် ~ 1100KB) ။ အကြောင်း 20 ကြိမ်ဖိုင်အရွယ်အစားတိုးလာ!
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးပုံရိပ်ချုံ့ချင်တယ်, ဒါသူတို့လျော့နည်းအာကာသကိုတက်ယူလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, JPG format ကိုရှေးခယျြ!
1) XnView ကိုဖွင့်, ငါတို့ဓါတ်ပုံတွေကို select နှင့် "Tools များ / အသုတ်လိုက်ထုတ်ယူခြင်း" (သို့မဟုတ်ခလုတ် Cnrl + U ၏ပေါင်းစပ်) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
2) သငျသညျဖိုင်တွေကိုအသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် setting များနှင့်အတူဒိုးကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာမေးရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
- ဖိုငျတှဲ - ဖိုင်များသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ရာအရပ်,
- ပုံစံ အသစ်က file ကို save လုပ်ဖို့;
- ထို setting များကိုသွားပါ ဘာသာပြောင်း (အဓိကဘေးတွင် Tab ကို။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ) နှင့်ပုံရိပ်တွေ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ရွေးချယ်စရာထားကြ၏။
3) "ပြောင်းလဲ" ဟုအဆိုပါဓာတ်ပုံများကိုအတူသင်တို့စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်သမျှအတိုင်းပြုမှတရာအမှန်တကယ်အံ့မခန်းရွေးချယ်စရာခုနှစ်တွင်!
program ကို XnView ကကမ်းလှမ်းစာရင်းထဲကတစ်ဦးကနည်းနည်း:
- မီးခိုးရောင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၏ရုပ်ပုံလုပ်နိုင်စွမ်း, အချို့အရောင်များ desaturate;
- (သင်ကွန်ယက်မှရုပ်ပုံများကို upload သွားလျှင်အသုံးဝင်သော) အားလုံးပုံရိပ်တွေအပေါ်ရေစာတစ်ခုတည်ထောင်ရန်,
- ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်ထဲမှာပုံရိပ်တွေကိုဖွင့်ဖို့: ဒေါင်လိုက်ရောင်ပြန်ဟပ်, အလျားလိုက်, 90 ဒီဂရီ, စသည်တို့အားဖြင့်လှည်; ။
- စသည်တို့ကို, image ကိုအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲ
4) နောက်ဆုံးခြေလှမ်း - နှိပ် လုပ်ဆောင်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့အလုပ်၏ Real-time စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ်, ဖြစ်ကောင်းသင်ပုံရိပ်တွေကနေ PDF files တွေကို၏ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၌စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပုံရိပ်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းများစွာမှာကြည့်ရှုကြ၏။ JPG, BMP, GIF,: ဒါဟာဖိုင်တွေကိုသိမ်းဆည်းများအတွက်ရေပန်းစားကို formats ထိခိုက်ခဲ့ကြလည်းဖြစ်ပါတယ်။ , ဆောင်းပါး၏အဓိကစိတ်ကူးအနှစ်ချုပ်ရန်။
1. ပုံရိပ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုမှာ - XnView ။
2. သင်တည်းဖြတ်ချင်သောရုပ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းထားရန် - BMP format ကိုသုံးနိုင်သည်။
3. JPG သို့မဟုတ် GIF ကို format ကိုသုံးပြီးပုံရိပ်တွေ၏ချုံ့တိုးမြှင့်ရန်။
ဓါတ်ပုံတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ 4, (HD ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဂိမ်းကစားခြင်း,) ကွန်ပျူတာ-intensive တာဝန်များကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။
စကားမစပ်သင်မည်သို့ပုံရိပ်တွေပြောင်းသလဲ? အဘယ် format နဲ့ hard drive ထဲမှာသိမ်းဆည်း?